HARGEYSA, Somaliland - Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo wariye-yaasha kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in wada-xaajood lagu dhameeyo colaadda gobolka Sool, oo ay isku hayaan Puntland tan iyo 2002.
Labada maamul ayaa ka jooga Sool Ciidamo badan kuwaasi oo dhowr ku galay dagaallo dhiig badan uu ku daatey, iyadoo dhinac walba uu sheeganayo inuu isaga leeyahay awood maamul ee guud ahaan gobolka.
Dagaalo kharaar ayaa ka dhacay dhawaan tuuladda Tukaraq ee gobolka Sool, oo wali ay ka jirto xiisad iyo saan-daan dagaal oo walaac badan ay ka muujiyeen Beesha caalamka, dowladda Federaalka, waxgaradka, Odayaasha, Ismida iyo shacabka labada dhinac.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa tilmaamay in Ummada Soomaaliyeed ay ka daashay dagaal sokeeye iyo inay is-disho, sidaas darteeda maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu nabad kula noolaado deriskiisa.
"Ma garanayo waxa ay Puntland midiyaha noogu sifeysaneyso, balse, aniga hadii aan nahay Somaliland, waxa aan kusoo caano maalnay waa Nabad, waxaana dooneynaa Nabad in lagu xaliyo wax kasta," ayuu yiri.
Hadalka Muuse Biixi wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan ciidamada difaaca Puntand ay weerareen Saldhigyo ciidan oo Somaliland ku leedahay Magaaladda Laascaanood, halkaasoo ay ka furteen Maxaabiis, sida uu sheegay gudoomiyaha Puntland ugu magacaaban gobolka.
Dhanka kale, wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo gobolka Sool, gaara ahaan Tuuladda Tukaraq waxay sheegayaan in maamulka Puntland uu halkaas uu geeyay ciidamo dheeraad ah, kadib markii dhawaan Madaxweyne Cabdiweli Gaas ku hanjabay duulaan ka dhan ah Somaliland.
Somalland ayaa dagaal kula wareegtay Tukaraq bishii January ee sanadkan xilli Madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku joogey magaalada Garoowe, ee xarunta Puntland.
Baaq Madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli xaaladda deegaanka Tukaraq lasoo sheegayo...